प्रा’ ण घातक किङ्ग कोब्रोले टो’क्दा पनि यिनलाई बि’ ष लाग्दै ! १३०० सय भन्दा बढ़ी स’र्प समाते कतिले टो’के कतिले!(भिडियो सहित) – Tufan Media News
प्रा’ ण घातक किङ्ग कोब्रोले टो’क्दा पनि यिनलाई बि’ ष लाग्दै ! १३०० सय भन्दा बढ़ी स’र्प समाते कतिले टो’के कतिले!(भिडियो सहित)
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १६:३६
काठ्माडौं, मानिस भित्र पक्कै पनि आ आफ्नो कला हुन्छ तर आज जुन कला भनौ या प्रतिभा हामीले देखाउदै छौ एकदमै अचम्म लाग्दो आनौठो छ। एउटा यस्तो खतरनाक प्रतिभा पक्कै पनि हर कसैमा यी कुराहरु सम्भव हुदैनन् ।
आज भोली नेपाली युटुबर हरुले निकैनै अचम्म खालका कन्टेन्ट हरु च्यानल बाट प्रशारण गरि रहेका हुन्छन । त्यसै क्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौ २१ बर्षिय युवा सागर पाण्डे जो आज भोली स्नेक म्यान भनेर पनि नेपालमा चिनिन्छन ।